Hay’adda lacagta ee IMF iyo Bankiga Adduunka oo sheegay in Soomaaliya ay u qalanto in daynta laga cafiyo. – Radio Daljir
Febraayo 14, 2020 9:19 b 0
War si wadajir ah uga soo baxay Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bankiga Adduunka waxa ay kaga hadleen Xaaladda deyn Cafinta Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay qaaday Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Guddiyada maamula labada hay’adood waxa ay qireen in isbadello dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka Hay’adda Maaliyadda Soomaaliya ay sameeyeen iyada oo ku hor gudban tahay duruufaha adage e dalka.
Agaasimaha Hay’adda IMF Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in oggolaanshaha ay bixisay Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF loosoo gaabiyo ay ka dhigan tahay mid galeysa Diiwaanka Taariikhi.
Waxay sheegtay in IMF ay si cad u aqoonsatay isbaddellada dhinaca dhaqaalaha ee ay Soomaaliya samaysay muddadii ay kormeerka dhaqaale ku hayeen shaqalaaha IMF, muhiimaddooda ugu weyn ay tahay in Soomaaliya ay marin u hesho kobaca dhaqaalaha si faqriga hoos loogu dhigo.
Madaxweynaha Bankiga Adduuunka David Malpass ayaa isna go’aanka soo baxay shalay ku sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay Soomaaliya si dhow ula shaqeeyeen, isla markaana ay Dowladda gacan ka siiyeen horumarka ay ka sameeyeen in ay waddanka gaarsiiyaan heer daynta laga cafin karo.
Waxa uu intaa raaciyay in geedi-socodka loo marayo dhameystirka in Soomaaliya deynta laga cafiyo lagu qancay, rajana uu ka qabo in lacaga dhaafo deymaha culus ee lagu leeyahay waqtiga fog.
Wasiirka Maaliyadda Dalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dhawaan Warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in Shuruudihii la hor dhigay Soomaaliya si deynta looga cafiyo ay fuliyeen, balse waxa kaliya la sugayo uu yahay go’aanka Dalalka lacagaha leh.